Adora & etc.: September 2014
Posted by Adora etc. at 09:344comments:
ကျမကို ပထမဦးဆုံး "ဟယ်ရီပေါ်တာ"နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတာ ကျမမေမေပါ။ မှော်လောကမှာ နာမည်တောင်မပြောရဲအောင် ကြောက်ရတဲ့ မှော်ဆရာ မိစ္ဆာကြီး Voldemort ကို နှိမ်နှင်း နိုင်ခဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ကောင်လေး ဟယ်ရီ နဲ့ သူငယ်ချင်းတစုရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာရေးဆရာမ JK Rowling ရဲ့ စာအုပ်တွေပေါ့။
JK Rowling ရဲ့ ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ "Harry Potter and The Philosopher's Stone" ကို ၁၉၉၈မှာထုတ်ဝေခဲ့ပေမဲ့ ကျမစဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်က ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန် ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ၂၀၀၁/၂၀၀၂ လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒစ်စနေရုပ်ရှင်တွေကို အသဲစွဲကြိုက်တဲ့ ကျမက စုန်းဆိုရင် စနိုးဝှိုက်နဲ့ အော်ရိုရာ မင်းသမီးလေးတွေကို ကျိန်စာတိုက်တဲ့ စုန်းမကြီးတွေကိုပဲ မြင်ပြီးစိတ်မဝင်စားလှပါဘူး။ မာမီက "သမီးရယ် .. ဒီစာအုပ်က သမီးကြိုက်တဲ့ ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန် ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်။ နိုင်ငံခြားမှာလဲ တော်တော် နာမည်ကြီးတယ်ပြောတယ်။ ဖတ်ကြည့်စမ်းပါအုံး။" လို့တိုက်တွန်းလို့ ဖတ်ကြည့်ရင်းက လက်ကမချနိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ပထမဦးဆုံးစာအုပ် (ဆရာမင်းခိုက်စိုးစန် ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်) ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ကျမအမေကိုသွားမေးတဲ့ မေးခွန်းက " သမီးအသက် ၁၁နှစ်လောက်တုန်းက အိမ်ကို ဇီးကွက်နဲ့ စာတွေဘာတွေလာသလား?" ဆိုတာပါ။ မေးမေးချင်း မာမီက စာအုပ်မဖတ်ရသေးတော့ ကြောင်သွားတာပေါ့။ နောက်မှ စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ပြီး ဟော့ဝပ်ဆိုတဲ့ မှော်ပညာသင်ကျောင်းကနေ စုန်းအတတ်နဲ့ မှော်ပညာတွေကိုသင်ကြားခွင့်ရကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွေ အသက်၁၁နှစ် ပြည့်တဲ့ မှော်ဆရာ၊ မှော်ဆရာမလေးတွေကို ဇီးကွက်နဲ့ ပို့တယ်ဆိုတာသိပြီး ရီလိုက်တာလေ။ ကျမအတွက်တော့ အဲဒီ အချိန်မှာ အဓိပ္ပယ်ရှိတာ၊မရှိတာထပ်ကို စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဟော့ဝပ်ကျောင်းကြီးကိုသွားကြည့်ချင်တာပါ။
စာရေးဆရာမJK Rowlingကလည်း သူ့ဆီကို ဟော့ဝပ်ကျောင်းတက်ချင်တဲ့အကြောင်း သူ့ပရိတ်သက်တွေဆီကစာတွေလာကြောင်း အင်တာဗျူးတခုမှာဖြေသွားတာဆိုတော့ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ဒီလိုရူးတာကျမတယောက်ထဲတော့ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။စားစရာတွေ အပြည့်ပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ထမင်းစားပွဲကြီးတွေ၊ ရွေ့နေတဲ့လှေကားတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့ ပန်းချီဓာတ်ပုံတွေကို ဘယ်သူမမြင်ဘူးချင်ပဲရှိပါ့မလဲနော်။ လန်ဒန်မြို့ တနေရာမှာရှိနေမဲ့ Diagon Alley ရယ်၊ ဟော့ဝပ်ရထားရပ်တဲ့ King Cross ဘူတာရုံ ပလက်ဖောင်း ၉- ၃/၄ရယ်ကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ။ ပြီးတော့ Goblin လို့ခေါ်တဲ့ အရပ်ပုပု မှင်စာလေးတွေပိုင်တဲ့ Gringotts ဆိုတဲ့ ဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံထုတ်ရပုံကလဲ ကျမတို့သိသလို ဘဏ်စာအုပ်နဲ့ ကောင်တာမှာ ထုတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပြန်ဘူးလေ။
ဟယ်ရီပေါ်တာရုပ်ရှင်တွေလဲ ထွက်ပြီးသားဆိုတော့ စာအုပ်ကိုမဖတ်ဘူးတောင် ဇာတ်လမ်းကိုတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာမို့လို့ ဇာတ်လမ်းကို အကျယ်ချဲ့ပြီး မရေးချင်တော့ပါဘူး။ ဟယ်ရီပေါ်တာစာအုပ်တွေက ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ မီလျံ ၄၀၀ကျော် ရောင်းချခဲ့ရသလို ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လဲ အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ Universal studio နဲ့Warner Bros ကုမ္ပဏီတို့ပေါင်းပြီး ပထမဦးဆုံး The Wizarding World of Harry Potter Theme Park ကို ၂၀၁၀ ဇွန်လ မှာ အမေရိကား ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ အော်လန်ဒိုမြို့က Islands of Adventure မှာ စဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ Harry Potter Theme Park မှာ အဓိကအနေနဲ့ ဟော့ဝပ်ကျောင်းကြီးရယ် (Rollar Coaster Rides) ၊ Hogsmeadeဆိုတဲ့ မှော်ဆရာ ရွာကလေးမှာ ထင်ရှားတဲ့ တံမြက်စည်းပျံ သုံးချောင်း ( Three Broomsticks) စားသောက်ဆိုင်၊ Honeydukes လို့ခေါ်တဲ့ သကြားလုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ ollivander မှော်ကြိမ်လုံးရောင်းတဲ့ဆိုင်အပြင် တခြားလက်ဆောင် ပစည်းဆိုင်အများအပြားရှိပါတယ်။ ဒီနှစ် ဇူလိုင်လမှာတော့ Harry Potter Theme Parkကို ထပ်ပြီးတိုးချဲ့တဲ့အနေနဲ့ Diagon Alley နဲ့ King Cross ဘူတာရုံ ကို Universal Studios Florida မှာထပ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တကယ်လူစီးလို့ရတဲ့ ဟော့ဝပ်ရထားနဲ့ King Cross ဘူတာရုံ ကနေ Hogsmeadeဘူတာကို သွားနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်းပါပဲ။
Harry Potter Theme Park အကြောင်းဖတ်ရင်း သဘောတွေကျနေခဲ့ရာကနေ တကယ်လဲ အမေရိကကိုသွားလည်ဖြစ်တော့ ချီကာဂိုကနေ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ အော်လန်ဒိုမြို့က Universal Studios Florida နဲ့ Islands of Adventure က မှော်အသိုင်းအဝိုင်းလေးထဲကို မရောက် ရောက်အောင်သွားလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမနဲ့ တူတူနောက်ထပ်ပို့စ်တွေမှာ စုန်းအတတ်တွေနဲ့ပြုစားထားတဲ့ မှော်ကမ္ဘာ ထဲကိုလိုက်လည်ပါအုံးနော်။
Posted by Adora etc. at 06:523comments:
Posted by Adora etc. at 18:392comments: